China Building mmiri na ọkụ eletrik ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Zhenyuan
Gụnyere ntinye mmiri (ntinye ihe owuwu nke mmiri mmiri na mmiri drainage) na ngwa eletrik (ihe owuwu ihe owuwu nke ọkụ eletrik), nke a na-akpọkarị eserese iwu mmiri. Mwube ihe owuwu nke mmiri mmiri na mmiri drainage bụ otu n'ime ihe ndị mejupụtara otu oru ngo na injinia oru. O bu isi ndabere maka ichoputa ego oru ngo na ichikota ihe owuwu, ya na akuku di nkpa nke ulo ....
Mmiri na ọkụ eletrik bụ nchekwa, bara uru karịa ihe niile, ọ bụ ịchọ mma na-esote.Mkpụrụ nke mmiri na ọkụ eletrik bụ inwe ike ịgagharị, anaghị agbanwe ngwa ngwa; Ọ bụrụ na ọ nwere ike ọchịchịrị, ọ ga-agba ọchịchịrị. A naghị ekwe ka ahịrị na-enwu gbaa.
Stylist chọrọ dịka ọnọdụ a kapịrị ọnụ nke ụlọ ahụ si dị, pịa nchekwa protection nchedo gburugburu ebe obibi-nchekwa nchekwa → ihe bara uru → ka mmetụta ndị dị otu a ga-atụle, chọọ ka ala nke kachasị ike meeju onye nwe ya.
Dika ihe a choro nke oru a, ihe osise nke ime mmiri na mmiri na-ekpochapu ga-agụnye eserese nhazi (atụmatụ izugbe, atụmatụ ụlọ), eserese sistemụ, eserese ihe owuwu (eserese buru ibu), nhazi na nkọwapụta ihe na ndepụta nke akụrụngwa akụrụngwa, wdg.
Atụmatụ mmiri na drainage kwesịrị igosipụta nhazi nke mmiri na drainage pipeline na akụrụngwa.
A ga-eji mmiri na mmiri na-asọpụta n'ime ala chọpụta ọnụọgụ nke atụmatụ ala. A ga-ese ala ala na okpuru ulo; Ọ bụrụ na elu ụlọ ahụ nwere tankị mmiri na akụrụngwa ndị ọzọ, a ga-adọpụ iche iche; typesdị, ọnụọgụ na ebe nke etiti ahụ ala nke ụlọ ahụ, dị ka idebe ihe ọcha ma ọ bụ akụrụngwa mmiri, bụ otu ihe ma nwee ike ịhazi atụmatụ ọkọlọtọ; ma ọ bụghị ya, a ga-adọta ya n'ala site n'ala. Enwere ike ịdọrọ ọtụtụ pipeline na atụmatụ. Ọ bụrụ na pipelines dị mgbagwoju anya, ha nwekwara ike ịdọrọ iche iche. Kpụrụ ahụ bụ na eserese ahụ nwere ike igosipụta ebumnuche atụmatụ ahụ ebe ọnụọgụ eserese dị obere.P pipeline na akụrụngwa kwesịrị ka a pụta ìhè na atụmatụ ahụ, yabụ, a ga-egosipụta pipeline site na akara siri ike, ndị ọzọ niile bụ obere ahịrị. Ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ ala ahụ n'ozuzu ya na nke atụmatụ ụlọ ahụ. Ihe a na-ejikarị eme ihe bụ 1: 100.
Atụmatụ mmiri na drainage ga-egosipụta ọdịnaya ndị a: ụdị, oke na ọnọdụ nke mmiri na-eji ụlọ na akụrụngwa; pipesdị ọkpọkọ ọ bụla na-arụ ọrụ, ngwa ngwa piping, ngwa ọcha, akụrụngwa mmiri, dịka igbe ọkụ, ọkụ mmiri, wdg, ga-anọchi anya akụkọ mgbe ochie; A ga-edeba ama na dayameta na ụdị mkpọ mmiri niile dị larịị, ọkpọkọ kwụ ọtọ na ngalaba ọkpọkọ.
Nkọwa nke eserese mmiri:
Ọ bụ eserese nke usoro a kapịrị ọnụ na ọnọdụ nke usoro mmiri, usoro mmiri na akụrụngwa eletriki, ntuziaka waya na sistemụ ọkụ n'ụlọ, ọ bụkwa ya bụ ntọala nke iwu ụlọ na ọkụ eletrik.
Owuwu mmiri na ọkụ eletrik Atụmatụ
Ike ugbu a ịbịaru1
Mmiri mmiri ịbịaru
Ike ugbu a ịbịaru2
Nke gara aga: Ngwongwo Ogwe osisi
Osote: Okpokoro Net, Klaasị Structure Heterosexual
Ngwa ngwa ụlọ ọrụ